Ganacsade xalay lagu dilay Bosaso – Radio Daljir
Febraayo 12, 2019 6:09 b 0
Kooxo hubaysan ayaa nin ganacsade ahaa xalay ku dilay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Dilka ayaa waxaa gaystay rag ku hubaysan bastoolad kuwaasi oo goobta ka baxsaday.
Marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Salaad Cabdi Cukaasha.
Dilka ayaa yimid xilli howlgalo ay wadaan ciidamada ammaanka uu ka socdo magaalada Bosaso, kaasi oo ah mid ku kooban xaafadaha Laanta hawada, iyadoo dad badan ay dhaliilayaan hab dhaqanka ciidamada ammaanka ah mid argagax iyo rasaas ay la dhacayaan dadka shacabka ah.
Ilhaan Cumar oo raali galin ka bixisay Yuhuud nacaybka